मान्छेको ज्यान लिने पासो महँगोमा बिक्ने भन्दै महिलाको हत्या! ऐनामा डोरी देखिएपछि भएका थिए फरार… – Butwal 24 News
October 10, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on मान्छेको ज्यान लिने पासो महँगोमा बिक्ने भन्दै महिलाको हत्या! ऐनामा डोरी देखिएपछि भएका थिए फरार…
‘यस्तो डोरी मूल्यवान हुने र महँगोमा बेच्न पाउने भन्दै हत्या भएको देखिन्छ,’ महानगरीय अपराध महाशाखाका एसपी कृष्ण पङ्गेनीले भने, ‘अन्धविश्वासले हत्यासम्मको स्थिति बनाएको देखियो।’
तान्त्रिक विद्याका लागि यस्तो डोरी बहुमुल्य हुने भन्दै उनीहरु २४ गते नै चिनजानमा रहेकी कमलाकहाँ पुगेका थिए। उनीहरुले सँगै खाना खाएका थिए। राति कमलाको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरुले कमलाको हत्या गरेपछि नुवाइधुवाइ गरेर डोरीलाई ऐना अगाडि देखाएका थिए। घाटी कसिएको डोरी ऐनमा देखाउँदा नदेखिने सुनेका उनीहरुले – हत्यापछि परीक्षण गर्नका लागि डोरी ऐनासामु देखाएका थिए।
योजनावद्ध रुपमा हत्या गरेपछि कमलाले लगाएका गहना र उनको मोबाइल समेत उनीहरुले लिएर गएका थिए। ‘कुरिती र अन्धविश्वासमा परेर हत्या गरेको देखियो,’ एसपी पङ्गेनीले भने। मजदुरी गर्दै आएका उनीहरु सँगसँगै काम गर्थे। कमलाले आफूँसँग काम गर्ने साथीहरु आएपछि खान खुवाएकी थिइन्।